Magaalada Muqdisho iyo marti-gelintii shirka madaxda urur goboleedka IGAD (AKHRISO) - Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Magaalada Muqdisho iyo marti-gelintii shirka madaxda urur goboleedka IGAD (AKHRISO)
Waxaa maalintii shalay laga bilaabo magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya ay gashay xaalad ammaan sugid oo aad u adag, iyadoo dhawaan marti gelineysa shir madaxeedka dalalka ku bahoobay IGAD, kuwaas oo markii ugu horeysay halkaasi ku shiraya.
Waxaa gebi ahaan la joojiyay isku socodka gaadiidka ee wadooyinka muhiimka ah ee dowladda, siiba garoonka diyaradaha, wadadda Maka Al-mukarama ilaa madaxtooyada iyo Isgosyska Banaadir ee KM5, waxaana la dhigay ciidamada sugaya ammaanka oo gaadiidka ka xayiray wadooyinkaasi.
Dadweynaha isticmaala wadooyinkaasi ayaa maanta la arkayaa iyagoo lugeynaya, waxaana laga yaabaa in marka uu soo dhowaado shir madaxeedka IGAD gebi ahaan dadka shacabka ah laga joojiyo isticmaalka wadooyinkaasi oo haatan ammaankooda si aan caadi ahayn loo ilaalinayo.
Shirka oo hore loo qorsheeyay inuu qabsoomo 10-ka Bishaan aynu ku jirno oo ku beegan maanta oo Sabti ah, ayaa waxaa dib loogu dhigay 13-ka September, taasoo micnaheedu yahay in dhaqdhaqaaqii wax iibsiga iyo diyaargarowga Ciidul-Adxaa uu ciriiri galayo siiba Wadadda Maka Almukarama oo ganacsiyadda ugu badan ka furan yihiin.
Dhinaca kale, mas’uuliyiinta dowladda federaalka Soomaaliya ayaa aaminsan in dadka Muqdisho ay waajib ku tahay inay dulqaad u yeeshaan arrintaan maadaama marti loo yahay, ayna tahay taariikhi in caasimadda ay marti-geliso shir madaxeedka dalalka ku bahoobay ururka IGAD, laakiin waxaa muuqata in xilli aad u xun uu shirkaasi kusoo beegmay.